IMini Yomgwebo—Iyintoni? | Okufundiswa YiBhayibhile
UCINGA ukuba iMini Yomgwebo iya kuba yimini enjani? Abaninzi bacinga ukuba izigidi zemiphefumlo ziza kuthontelana phambi kwetrone kaThixo. Apho mntu ngamnye uza kufumana isigwebo sakhe. Abanye baza kuvuzwa ngobomi basezulwini, baze abanye bagwetyelwe intuthumbo engunaphakade. Kodwa iBhayibhile ichaza into eyahluke ngokupheleleyo koko. ILizwi likaThixo aliyichazi le mini njengexesha eloyikekayo, kodwa liyichaza njengexesha elinik’ ithemba nelohlaziyo.
KwiSityhilelo 20:11, 12, umpostile uYohane uyichaza ngale ndlela iMini Yomgwebo: “Ndabona itrone enkulu emhlophe nalowo wayehleli kuyo. Umhlaba nezulu zasaba zemka phambi kwakhe, zaza azafunyanelwa ndawo. Kwaye ndababona nabafileyo, abakhulu nabancinane, bemi phambi kwetrone, nemisongo yayivuliwe. Kodwa kwavulwa omnye umsongo; umsongo wobomi. Baza abafileyo bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo ngokwezenzo zabo.” Ngubani lo Mgwebi kuthethwa ngaye apha?
NguYehova uThixo onguMgwebi owongamileyo woluntu. Kodwa uye wamisela mntu uthile ukuba enze umsebenzi wokugweba. KwiZenzo 17:31, umpostile uPawulos wathi uThixo “umise imini anenjongo ngayo yokuba agwebe umhlaba omiweyo ngobulungisa ngendoda ayimiseleyo.” Lo Mgwebi umiselweyo nguYesu Kristu ovusiweyo. (Yohane 5:22) Kodwa iqala nini iMini Yomgwebo? Inde kangakanani?
Incwadi yeSityhilelo ibonisa ukuba iMini Yomgwebo iza kuqalisa emva kwemfazwe yeArmagedon, xa yonke inkqubo kaSathana iza kube itshatyalalisiwe emhlabeni. * (ISityhilelo 16:14, 16; 19:19–20:3) Emva kweArmagedon, uSathana needemon zakhe baza kuvalelwa enzonzobileni iminyaka eliwaka. Ebudeni belo xesha, iindlalifa zasezulwini ezili-144 000 ziza kuba ngabagwebi zize zilawule “njengookumkani kunye noKristu iminyaka eliwaka.” (ISityhilelo 14:1-3; 20:1-4; Roma 8:17) IMini Yomgwebo ayizukuba yinto nje ekhawulezileyo yeeyure ezingama-24 kuphela. Iza kuba yiminyaka eliwaka.
Ebudeni belo xesha leminyaka eliwaka, uYesu Kristu uya “kugweba abaphilayo nabafileyo.” (2 Timoti 4:1) “Abaphilayo” iya kuba ‘sisihlwele esikhulu’ esiya kusinda kwiArmagedon. (ISityhilelo 7:9-17) Kwakhona umpostile uYohane wabona “nabafileyo . . . bemi phambi kwetrone” yokugweba. Njengoko uYesu wathembisayo, ‘abo bakumangcwaba enkumbulo baya kuliva ilizwi [likaKristu] baze baphume’ ngokuthi bavuke. (Yohane 5:28, 29; IZenzo 24:15) Kodwa bonke baza kugwetywa ngokusekelwe entwenini?
Embonweni kampostile uYohane, ‘imisongo yayivuliwe,’ baza “abafileyo bagwetywa ngokwezinto ezibhalwe kuloo misongo ngokwezenzo zabo.” Ngaba le misongo iyingxelo yezenzo zabantu zexesha elidlulileyo? Akunjalo, umgwebo awuyi kusekelwa kwizinto abantu ababezenzile ngaphambi kokufa kwabo. Sikwazi njani oko? IBhayibhile ithi: “Lowo uye wafa ugwetyelwe kwisono sakhe.” (Roma 6:7) Ngoko abo bavuswayo ziya kucinywa zonke izono zabo. Ngoko imisongo imele ukuba yimiyalelo engakumbi kaThixo. Ukuze baphile ngonaphakade, abo baza kusinda kwiArmagedon kunye nabo baza kuvuswa, kuza kufuneka bathobele nayiphi na imiyalelo kaThixo eya kubakho ebudeni beminyaka eliwaka. Ngoko abantu baza kugwetywa ngokusekelwe koko bakwenzayo ebudeni beMini yoMgwebo.
IMini Yomgwebo iya kuvulela izigidi zabantu ithuba lokuba zifunde okokuqala ngokuthanda kukaThixo zize ziphile ngokuvisisana nako. Oku kuthetha ukuba kuya kubakho umsebenzi omkhulu wokufundisa. “Ngokuqinisekileyo abemi belizwe elinemveliso baya kufunda ubulungisa.” (Isaya 26:9) Noko ke, asingabo bonke abaza kukwenza ukuthanda kukaThixo. UIsaya 26:10 uthi: “Nokuba ongendawo angababalwa, akafundi bulungisa. Elizweni lokuthe tye uya kwenza ngokungekho sikweni, angabuboni ubuhandiba bukaYehova.” Aba bangendawo baza kubulawa ngonaphakade ebudeni beMini Yomgwebo.—Isaya 65:20.
Ekupheleni kweMini Yomgwebo, abantu abasindileyo baya kube ‘bebuyele ebomini’ ngokupheleleyo njengabantu abafezekileyo. (ISityhilelo 20:5) Ngaloo ndlela iMini Yomgwebo iya kulubuyisela uluntu kwimeko yalo yantlandlolo yokufezeka. (1 Korinte 15:24-28) Kuya kwandula ke emva koko kubekho uvavanyo lokugqibela. USathana uza kukhululwa eluvalelweni aze avunyelwe ukuba azame ukulahlekisa uluntu okokugqibela. (ISityhilelo 20:3, 7-10) Abo bamxhathisayo baya kunandipha inzaliseko epheleleyo yesi sithembiso seBhayibhile: “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.” (INdumiso 37:29) Ewe, iMini Yomgwebo iya kuba yintsikelelo kulo lonke uluntu oluthembekileyo!
^ isiqe. 1 Ngokuphathelele iArmagedon, nceda ubone i-Insight on the Scriptures, Umqulu 1, iphepha 594-5, 1037-8, nesahluko 20 sencwadi ethi Nqula Okuphela KoThixo Oyinyaniso, ezipapashwe ngamaNgqina kaYehova.
Ubusazi na ukuba iBhayibhile ithetha kakuhle ngesiphelo?